गठबन्धनको त्रास र आश
मुलुक दशैँको रमझममा थियो । ठीक त्यसैबेला प्रमुख वाम पार्टी भने नयाँ गठबन्धन बनाउन तल्लिन थिए । चुनावी प्रयोजनका लागि भनिए पनि पार्टी एकीकरणको तहसम्म पुग्ने अभिप्रायले छलफल भएका थिए । अभूतपूर्व र ऐतिहासिक गठबन्धनले नेपालमा वाम एकताको नयाँ क्षितिज उघारेको टिप्पणी गरिए । यसबाट एमाले, माओवादी केन्द्र र नयाँ शक्ति पार्टीका कार्यकर्ता औधी खुसी देखिए । सँंगसँंगै केही नेता कार्यकर्ताले भने यो अभूतपूर्व भनिएको घटनाक्रमको खुला हृदयले स्वागत गर्न सकेनन् । दुवै पार्टीका आफ्नै सिद्धान्त र पहिचान छन् । भलै एमाले र माओवादी केन्द्रले आफूलाई कम्युनिष्ट भन्न भने छाडिसकेका छैनन् । उता, वाम एकताको डङ्कासँगै चर्चामा आएको नयाँ शक्ति त आफूलाई कम्युनिष्ट भन्न समेत नरुचाउने अवस्थामा थियो । यस्ता अलौकिक र विपरीत धारका पार्टीबीच कम्युनिष्ट तालमेलका नाममा गठबन्धन र एकीकरणका कुरा सतहमा आएपछि धेरैलाई अचम्ममा पारेको हो । यसैको प्रतिक्रिया स्वरूप नेपाली काँग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाउने अभियानलाई तीव्रता दियो । यसलाई कतिपयले वाम एकताको सम्भावित भयबाट त्रसित काँग्रेसको रुवावासीका रूपमा पनि चित्रित गरे । तर धेरैतिरबाट भने दुई ध्रुवमा बाँडिएको राजनीतिले देशलाई स्थिरतातर्फ लैजाने अनुमान गरिएको छ । यसरी हेर्दा अहिले मुलुक सम्भावित गठजोडको नयाँ अभ्यासतर्फ अग्रसर भएको प्रतित हुन्छ ।
समृद्ध लोकतन्त्रका लागि राजनीतिक दल बलियो हुनु स्वाभाविक मान्नुपर्छ । यस अर्थमा राजनीतिक दल फुट्नु भन्दा जुटेको राम्रो हो । स्थानीय निर्वाचनको परिणामका कारण मुलुककै ठूलो दलको हैसियतमा रहेको एमाले र तेस्रो शक्तिका रूपमा रहेको माओवादी केन्द्रबीचको गठबन्धन चाहिँ आफैँमा आश्चर्यजनक छ । आसन्न प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमा एमाले सबैभन्दा ठूलो शक्तिका रूपमा उदाउने धेरैले अनुमान पनि गरेका छन् । यो अवस्थामा माओवादीसँगको लगनगाँठो भने स्वाभाविक मान्न नसिकिएको हो । बलियो पार्टीले कमजोर पार्टीसँग ६०–४० को आधारमा भागबण्डा गर्न सहमति जनाउनुलाई धेरैले आशङ्काका दृष्टिले हेरेका हुन् । एमालेको लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठामा शङ्का नहोला, तर माओवादीको राजनीतिक दस्ताबेजबाट अझै साम्यवाद हटिसकेको छैन । यी दुई दल कुन आधारमा एक हुन सक्ने भन्ने प्रश्नको जवाफ खोजिएको मात्र हो । विगतमा यी दुवै दलका नेताले एक अर्कालाई गरेको गाली गलौज सम्झने हो भने यो मिलन स्वाभाविक मान्नै सकिन्न । धेरै पनि भएको छैन, यही महिनाको पहिलो साता प्रदेश नं. २ मा यी दुवै पार्टीका कार्यकर्ताको ताण्डव नृत्यले बनाएको घाउको खाटा बसेको समेत छैन । यो नाटकीय एकता कसरी र केका लागि ? प्रश्न गम्भीर छ ।
सँगसँगै नयाँ वाम गठबन्धनले आगामी सङ्घ र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा दुई तिहाइ ल्याएर सरकार बनाउने उद्घोष गरेको छ । अहिले दुई तिहाइको विजय केका लागि ? स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्छ – सत्ता कब्जाको मनसुवा त होइन ? हैन भने दुई तिहाइ नै चाहिने किन हो ? इतिहास साक्षी छ – कम्युनिष्टले सत्ता कब्जा गरेपछि लामो समय शासन गरेका छन् । त्यही अभ्यासको मनोकांक्षाबाट त कतै यो गठबन्धन बनेको हैन भन्ने त्रास लोकतन्त्रवादी पक्षले देखाएको हुन सक्छ । नत्र आवधिक चुनावमा आज जित्ने पार्टीले भोलि शर्मनाक हार बेहोर्ने अवस्था पनि आउँछ, आत्तिनु पर्ने केही छैन । यो गहन आशङ्कालाई वाम गठबन्धन पक्षधरले चित्त बुझ्दो जवाफ दिन सकिरहेको छैन । उता, नयाँ शक्तिका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई समेत यो गठबन्धनमा समाहित हुनुका पछाडि पनि धेरैले अचम्म मानेका छन् । साम्यवाद र माक्र्सवादलाई तिलाञ्जली दिएर माओवादी त्यागेका डा.सापको यो पुनरागमनले नयाँ प्रश्न खडा गरेको छ । डुबतेका तिन्केका सहारा भनेजस्तो डा. सापलाई यो गठबन्धन फलिफापजन्य हुने देखिन्छ । एमालेसँग ३६ को आँकडा रहेको डा. साप अहिले सूर्य चिह्नबाटै चुनाव लड्न राजी हुनु आफैँमा रहस्यमय मानिएको छ । साथै हिजो मधेशवादीलाई दक्षिणका एजेण्ट देख्ने एमाले अहिले त्यसैका नेतालाई सूर्य चिह्नबाट चुनाव लडाउन हतारिने थिएन । जसरी भए पनि सत्ता कब्जा गर्ने एक मात्र उद्देश्य देखिन्छ एमालेको ।
०४६ को परिवर्तनपछि एमालेले जनताको बहुदलीय जनवादको अभ्यास गरेको छ । जनताको मत लिएर सत्तामा जाने वेस्ट मिनिस्टेरियल प्रणालीको अगुवा बनेको एमाले पटकपटक सत्तामा पुगिसकेको छ । भोलि आफ्नै बलबुताले फेरि पुग्ने हैसियत पनि राख्छ । आगामी चुनावबाटै सत्तामा उक्लने उसको सम्भावना कमजोर थिएन तैपनि दुई तिहाइको भूत किन र केका लागि चढेको हो ? बुझ्न सकिएन । त्यो पनि कमजोर जमातलाई झण्डै ५० प्रतिशत सिट जिम्मा लगाएर । लोकतान्त्रिक गठबन्धनको मूल चासो पनि यही देखिन्छ ।
थोरै कुरा नैतिकताको पनि । माओवादी केन्द्रले एमालेसँग नाता तोडेर काँग्रेससँग जोडेको डेढ वर्ष जति भयो । एमाले अध्यक्ष के पी ओलीले भद्र सहमतिबमोजिम प्रचण्डलाई सत्ता हस्तान्तरण नगरेपछि विकसित घटनाको परिणाम थियो काँग्रेस माओवादी गठबन्धन तर अप्रत्यासित र नाटकीय ढङ्गले एमालेसँग फेरि लगनगाँठो जोडेको माओवादी काँग्रेस नेतृत्वको सरकारमा विना सङ्कोच टाँस्सिएको छ । बिहे एउटासँग गर्ने सुहाग रात अर्कासँग मनाउने ? यो नैतिक प्रश्न हो की होइन ? यो प्रश्न एमालेका लागि पनि हो । माओवादीको यो चरित्र स्वीकार्य हुन्छ त ? यसको जवाफ एमालेले वस्तुनिष्ठ भएर दिएको छैन । स्वाभाविक छ माओवादीमार्फत चुनावमा एमालेले पनि सत्ता चलाउने हो । त्यसैले यसलाई एमालेले उचित ठह¥याएको छ । बरु प्रचण्डपथ स्वीकार्न तयार देखिन्छ एमाले । प्रचण्ड स्वयं भने प्रधानमन्त्रीले भने तत्काल सत्ता छाड्न तयार देखिनु भएको छ तर ओलीलाई यो स्वीकार्य छैन । यसैबाट पनि यो प्रकरणमा एमालेको स्वार्थ झल्किन्छ । प्रधानमन्त्रीले माओवादी मन्त्री हटाउन पाउँदैनन् भनेर ओलीको बोली सबैभन्दा चर्काे छ ।
अर्कातिर लोकतान्त्रिक गठबन्धनले चुनाव पछि धकेल्न खोजेको आरोप लगाइएको छ । मङ्सिर १० मा हुने पहिलो चरणको चुनाव पछि सार्न वाम गठबन्धन सबैभन्दा बढी आतुर देखिएको छ । कारण गठबन्धनको सिट मिलाउनै उसलाई हम्मे परिरहेको छ । सरकारले चुनाव सार्ने कुरा कहीँ कतै गरेको सुनिएको छैन तर एमालेले यसलाई अनावश्यक रूपमा उचालिरहेको प्रष्ट छ । यसको कारण माथि उल्लेख भएझैँ स्वयं एमालेलाई अप्ठेरो परेको छ । नेपाली काँग्रेसले यो मुलुकलाई सधैँ सङ्कटबाट पार लगाउने जिम्मेवारी वहन गरेको छ । इतिहास साक्षी छ – मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तनका लागि काँग्रेस सधैँ अग्रणी भूमिकामा रहेको छ । अहिलेको सङ्कटबाट पार लगाउन पनि उसले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने छ । निर्वाचनमा हार्ने त्रासमा काँग्रेसले कहिल्यै दायित्वबाट भागेको देखिएको छैन । वाम गठबन्धनबाट काँग्रेस आत्तिनु पर्ने कारण नै छैन । काँग्रेसका मतदाता अलग छन् । उसका शत्रु वाम शक्ति होइन । असली शत्रु भनेका स्वयं काँग्रेसी नै हुन् । यिनलाई व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने आगामी निर्वाचनमा पनि काँग्रेस पहिलो शक्तिकै रूपमा उदाउने निश्चित छ । यसका लागि नेताहरूले हाम्रा भन्दा राम्रा उम्मेदवारलाई टिकट दिन सक्नुपर्छ । दुःखको कुरा अहिले पनि काँग्रेस नेताहरूमा यो चेत पलाएको छैन । भर्खरै मात्र सभापति शेरबहादुर देउवाले गठन गरेको संसदीय बोर्डमा भागबण्डाकै आधारमा सदस्य तोकिएको छ । आफ्नालाई टिकट दिलाउन नै विधान विपरीत बढी सदस्य राखेर बोर्ड बनाइएको छ । यसले सही उम्मेदवार छनोटमा बल पुग्दैन । समय घर्किसकेको छैन । काँग्रेसका नेताहरूले ध्यान पु¥याउन सक्ने हो भने यस्तो वाम गठबन्धनको कुनै प्रभाव पर्ने छैन ।
प्रकाशित मिति: २०७४/६/२७